၉၀ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်စေသော ဂီတသံများဖြင့် ကျင်းပ. (တိုကျို... ဂျပန်). ~ ဒီမိုဝေယံ
၉၀ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်စေသော ဂီတသံများဖြင့် ကျင်းပ. (တိုကျို... ဂျပန်).
၉၀ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်စေသော ဂီတသံများဖြင့် ကျင်းပ
လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၉၀ နှစ်ပြည့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများက စုစည်း၍ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို ရှင်သန်စေသော ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာသံစဉ်တေးဂီတသံများဖြင့် တိုကျိုမြို့တွင် ယနေ့ညနေပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားကို မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ(ဂျပန်)က အဓိကဦးစီးခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၊ အန်အယ်လ်ဒီ(အယ်အေ-ဂျပန်)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များက အမှာစကားပြောကြား၍ ကိုလိုနီခေတ်အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် မျက်မှောက်ခေတ် ယနေ့မြန်မာပြည် အခြေအနေများကို လူငယ်တချို့မှ၎င်းတို့၏အမြင်နှင့် တွဲဖက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။
``အမျိုးသားနေ့က နှစ်ကိုးဆယ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ တချိန်က အမျိုးသားရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ရှေးကလူကြီးတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရော မမေ့သင့်မမေ့အပ်တဲ့ တိုင်ပြည်ရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရော၊ နောက်တကြောင်းက အခုအချိန်ဟာ မြန်မာပြည်အတွက် နိုင်ငံရေးအရ အင်မတန်မှ အရေးကြီးနေတဲ့အချိန် ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုရော တိုင်ပြည်ကို စစ်ကျွတ်ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်ရော ဆထက်တပိုးတိုးပြီး အားတက်စေဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်´´ဟု မြန်မာအမျိုးသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ချိုချိုအေးက ပြောပြသည်။
အထူးသဖြင့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ကို `တို့ဗမာ´သီချင်းအပါအ၀င် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး၊ အမျိုးသားရေးယဉ်ကျေးမှု တေးဂီတဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုနှင့် အမျိုးသားနေ့ အစ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်ကဟု အဆိုရှိသည့်အတိုင်း တက္ကသိုလ်အောက်မေ့ဖွယ် တေးဂီတသံစဉ်များဖြင့် တက်ရောက် လာသူများအား သီဆိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာပွဲခံမင်းသမီးအကကို မ၀င်းဝင်းမြင့်မှကပြ၍ မစံပယ်၏စောင်းလက်သံဖြင့် ဒေါ်ချိုချိုအေးမှ ``ဇေယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလံ´´သီချင်းကြီးကိုလည်ကောင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို ဂုဏ်ပြုထားသောသီချင်းနှင့် ဂီတဗိမာန်တေးသီချင်းကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကျော်စိုး ကလည်ကောင်း၊ မဖြူဖြူမြင့်မှ ``မြနန္ဒာ´´သီချင်းဖြင့်လည်ကောင်း၊ ``ဇွဲ´´သီချင်းကို ကိုကျော်သူရတို့မှ အမျိုးသားမာန်အပြင့်ဖြင့် အားတက်ဖွယ် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
``ဂီတဆိုတာက အစွမ်းပကားကြီးမားပါတယ်၊ `တို့ဗမာ´သီချင်းမျိုးဆိုရင် အင်မတန်မှ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို တက်ကြွစေပါတယ်၊ ဒီသီချင်းကြောင့် နယ်ချဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာ လူတွေအများကြီး ပါဝင်လာတဲ့အထိစွမ်းခဲ့တယ်။ အဲ့ဒိသီချင်းပေါ်တုန်းကဆိုရင် ချက်ခြင်းပဲ သခင်နှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာဆိုပြီးထကြွေးကြော်ရာကနေ နောက်အားလုံးပါဝင်လာခဲ့တယ်။ ဒါ့တော့အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် နောင်လာနောက်သားတွေကို သိစေချင်တယ်၊ ကြားစေချင်တယ်၊ ပိုပြီးတော့လည်း မျိုးချစ်စိတ်တွေ တက်ကြွစေချင်တယ်´´ဟု ဂီတဖြင့် ကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။
မိနားမိအိုးစုခ ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော ၉၀ နှစ်ပြည့်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်မှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် အမှာစကား ပြောကြားပေးခဲ့ပြီး လူဦးရေ တရာကျော်ခန့် တက်ရောက်လာခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းသိရှိရသည်။